Wararka Maanta: Axad, Jan 19, 2014-Wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo Maanta soo Xirmaya
Ajandeyaasha wejiga saddexaad ee wada-hadalka waxaa ugu mihiimsanaa: qiimeynta waxa ka hirgalay qodobbo ay labada dhinac horay ugu heshiiyeen iyo weliba sidii la isula jeexi lahaa tubta loo raacayo wada-hadalka iyo qodobada laga arrinsan doono mustaqbalka dhow.
Ergooyinka labada dhinac uga qayb gelaya shirarka ka socda Istanbul waxaa kala hoggaaminaya wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya C/xakiim Xuseen Guuleed iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yoonis.
C/xakiim Xuseen Guuleed oo la hadlay warbaahinta caalamiga ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wada-hadallada, isagoo tilmaamay in dhankooda ay ka go'an tahay inay tanaasul badan sameeyaan.
Dhanka kale, Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in waxyaabo badan laysku afgartay haseyeeshee qadiyadda gooni isu-taagga Somaliland ay tahay mid aan miiska saarneyn taas oo marna aan gorgortan laga geli doonin.
Dadka Soomaaliyeed iyo kuwa Somaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay wada-hadallada u socda Somaliland iyo Soomaaliya oo soo bilowday xilligii ay dalka ka jirtey dowladdii kumeel gaarka ahayd ee uu hoggaaminayey Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in lasoo saaro war-murtiyeed ka hadlaya qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen. Wixii ka soo kordha dib ayaan idiinka soo gudbin doonnaa haddii uu Eebe ogolaado.